एउटा कम्पनीले यस्तो इलेक्ट्रिक बाइक बनाइरहेको छ जुन सडकमा चल्नुको साथ साथै हावामा पनि उड्न सक्छ । फ्रान्सेली कम्पनी लाजारेथको बाइक LMV 496 को यस्तो सुविधा छ कि यो सडक मोडबाट उडान मोडमा परिवर्तन हुन्छ । यसका लागि केवल एक स्विच ...
मृगौला प्रत्यारोपणमा क्रान्ति ल्याएका अर्थशास्त्री
प्रत्यारोपणका लागि हालैका दिनमा मृगौला प्राप्त गर्ने सम्भावना नाटकीय रूपमा बढेको छ। यसको श्रेय भने एकजना अर्थशास्त्री एल्भिन रथलाई जान्छ । रथले आर्थशास्त्रको सिद्धान्त प्रयोग गरेर संसारमा मृगौला सहज रूपमा प्राप्त हुन सक्नेगरी मृगौलादान प्र...
२५ डिसेम्बरमा ब्रिटिश मेडिकल जर्नल पत्रिकामा प्रकाशित सबैभन्दा लोकप्रिय मेडिकल लेखको २० वर्ष हुनेछ । यस पत्रिकाले चिकित्साको क्षेत्रमा धेरै पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । यस लेखले हालसम्म सबैभन्दा धेरै पढिएको र डाउनलोड गरिएको लेखहरूको रेक...
आजकल सुविधाजनक हुनुको साथै अनलाइन किनमेल आवश्यकता भएको छ। बजारकाे चक्कर काटनुकाे सट्टा, घरैमा बसेर सबै सामानको पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुका साथै सजिलै फिर्ता पाउने कारणले अनलाइन किनमेल बढ्दै छ । प्रत्येक चाडलाई यी कम्पनीहरूको...
जाडोका लागि वर्ल्डलिंकले ल्यायो नयाँ अफर
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले जाडोलाई लक्षित गर्दै नयाँ अफर ल्याएको छ। ग्राहकहरुको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै एक वर्षको जाडोका लागि वर्ल्डलिंकले तात्तातो हिटरनेट अफर ल्याएको हो। तात्तातो अफर अन्तर्गत १७५०० रुपैयाँमा...
काठमाडौँ । आजको जमानामा दैनिकी तथा विशेष कामको लागि मोबाइल फोन अत्यावश्यक बनेको छ । मोबाइल फोन पहिलो पटक करिब ४५ वर्ष पहिला ३ अप्रिल १९७३मा प्रयोगमा आएको थियो । यसको पहिलो प्रयोग मोटोरोलाको पूर्व उपाध्यक्ष र डिभिजन म्यानेजर मार्...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्य हेमकुमार राईले तीन वर्षभित्र सोलुखुम्बुको हरेक घरमा बिजुलीबत्ती पुग्ने बताउनुभएको छ । सोलुखुम्बुमा स्थापना गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रको उद्घाटन गर्दै सांसद राईले निर्वाचित भएदेखि...
क्यालिफोर्निया । पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय भइरहेको “टिकटक” नामको भिडियो एप डाउनलोड गर्नेहरुको संख्या एक अर्ब ५० करोड पुगेको छ । सेन्सर टावरको पछिल्लो विवरणमा एप्पलको एप स्टोर र गुगलको प्लेस्टोरबाट टिकटक एप डाउनलोड ग...
प्रधानमन्त्रीद्वारा सिंहदरबारबाटै माथिल्लो त्रिशूली थ्री एको उद्घाटन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उहाँले आज सिंहदरबारभित्रबाट स्वीच थिचेर त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो। रसुवा...
काठमाडौँ । हिमाली जिल्ला डोल्पाका आठवटै स्थानीय तहमा विद्धुत र सञ्चारको गतिलो सुविधा छैन । विगतदेखि स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत विद्युत् र सञ्चारको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । अहिलेको युगमा अत्यावश्यक साधनको ...
काठमाडौँ । उपभोक्ताको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउन सरकार सफल भएको छ । पछिल्ला तीन वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखेर विद्युत् व्यवस्थापन गरेपछि विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउन सफल भएको हो । सो सफलतास...
रवीन्द्र काफ्ले,फिदिम । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ मा हालै निर्माण सम्पन्न भएको तल्लो हेवा जलविद्युत् आयोजनाबाट २२.३४ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । काबेली कोरिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा ...
ओप्पोको बटन बिनाको स्मार्टफोन आउँदै
काठमाडौं । कुनै बेला तपाईले बोक्ने मोबाइल हातले छोएर होइन बटन दबाएर मात्रै चलाउन सकिन्थ्यो । तर समय वित्दै जाँदा मोबाइलबाट बटमको संख्या घट्दै गयो र मोबाइलमा स्क्रीनबाटनै सबै काम गर्न सकिने भयो । पछिल्लो समय एप्पललगायत साम...
काठमाडौं । हाल अमेरिकाको प्रतिबन्धित क्षेत्र एरिया–५१ निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यससँग सम्बन्धित विभिन्न मिम भाइरल भएसँगै यसको चर्चा अझै चुलिएको छ । मुख्यतया, अमेरिकी सरकारले यस क्षेत्रमा विभिन्न रहस्य लुकाएर राखेको भन्ने हल्ल...
काठमाडौँ । यदि पृथ्वीमा कुनै क्षुद्र ग्रह अथवा उल्कापिण्ड आएर ठोक्किए के होला ? हरेकले कल्पना गर्न सक्छ, यसले ठूलो आपत्ति निम्त्याउन सक्छ । त्यसो भए के यस्ता उल्का पिण्डलाई टाढै रोकेर यसको आपत्तिलाई रोक्न सकिएला त ? ब्रह्माण्डमा धेर...
काठमाडाैं । एउटा वाहन विशाल खाल्डोको एक छेउमा गुडिरहेको थियो, अन्तरिक्षयात्रीहरू सो वाहनमा जडिएको ऐना टल्केको हेरिरहेका थिए, त्यो ऐनाले सूर्यको किरणलाई खाल्डोतिर प्रतिविम्बित गरेर त्यहाँ रहेको पानी र हिउँको अवशेष खन्ने काम ...
काठमाडाैं । सन् १९६९ जुलाई २० मा अमेरिकी अन्तरिक्षयात्री निल आर्मस्ट्रङ एपोलो–११ को यान इगलबाट बाहिर निस्के र चन्द्रमामा पाइला राख्ने पहिलो मानिस बने । उनले घोषणा गरे, ‘उनको त्यो सानो कदम मानवताको ठूलो छलाङ हो ।&rs...
खस्यौली । रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा बुधबार विभिन्न कृषि उपकरण किसानलाई वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले नगरपालिकाको ५० प्रतिशत अनुदानमा किसानहरुलाई पाँच मिनी ट्रिलर, एक पावर ट्रिलर, एक रिपर र एक ...
काठमाडौँ । समाजिक सञ्जालमा अहिले बुढो हुने आतङ्क चलिरहेको छ । हुँदाखाँदाका अनुहार बूढो भएको बनाउँदै पोष्ट गर्दै लाइक कमेन्टको आश गर्नेहरूले अब सोच्ने बेला आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अहिले बुढ्यौलीमा तपाई कस्तो देखिनु हुनेछ भन्ने ...
यी हुन गुगलमा सर्च गर्न नहुने कुराहरू
काठमाडौँ । मानिसहरूमा इन्टरनेट चलाउने लत बसेको हुन्छ । मोबाइल तथा ल्यापटपमा विभिन्न सर्च इन्जिनहरू बाट लेखेरै तथा भ्वाइसमार्फत आफू अनुकूलका सामग्री सर्च गर्ने गरेको पनि देखिन्छ । यसबाट पर्नसक्ने जोखिमबारे सबै मानिस सचेत हु...